Mitzvah ve ny valiny? Raby Michael Avraham
Mitzvah ve ny valiny?
Ny Ramban ao amin’ny fanamarihany momba ny Bokin’ny Deoteronomia (fanombohan’ny toko L) dia milaza fa misy mitzvah hanaovana teshuva. Ity mitzvah ity dia ianarana avy amin’ilay andininy (ibid.): “Ary ny Sabata ho an’i Jehovah Andriamanitrareo”. Etsy an-danin’izany, i Maimonides ao amin’ny Lalàn’ny Fibebahana (XNUMX:XNUMX, XNUMX) dia manoratra fa io andininy io dia fampanantenana avy amin’Andriamanitra fa hibebaka ny faran’ny Isiraely. Misy mitzvah hibebahana koa ve ny fomban'i Maimonides?
הtoerana (Mitzvah Shasad) sy ny hafa dia efa nanondro fifanoherana miharihary amin'izao fotoana izao. Amin'ny lafiny iray, bNy Bokin’ny Didy (Mitzvah Ag) Maimonides nanoratra hoe:
Izy no nanome baiko ny hiaiky ny fahotana sy ny heloka vitantsika alohan’ny hiakaran’Andriamanitra ka hilaza izany amin’ny valiny.
Tsy misy didy mamaly izany eto. Ny resaka fiaiken-keloka dia voalaza eto hoe mitzvah misy fepetra : raha misy olona manao konfesy dia tsy maintsy mikonfesy miaraka amin'ny fanatanterahana ny fiaiken-keloka (ary izany rehetra izany dia miaraka amin'ny fitondrana sorona). Ny fanaovana teshuva mihitsy no toa tsy mitzvah eto (toy ny amin'ny famonoana, izay te hihinana hena dia tsy maintsy mamono ara-dalàna. Ny famonoana dia mitzvah misy fepetra, fa ny fihinanana hena per se dia azo antoka fa tsy mitzvah).
Avy amin'izany ny lehilahy iray mamarana Mpitarika fampianarana (Mitzvah Shasad), fa raha tsy miverina ny mpanota iray dia tsy manana sazy mihitsy izy noho ny tsy fibebahana (noho ny fandikan-dalàna taloha ihany no voasazy). Nampiany koa fa na dia nibebaka sy tsy nibaboka aza izy, dia tsy nanafoana ny didy nataon'i Davidoi, satria tsy mitzvah tsara izany (mitzvah 'misy' izany, izay manao izany dia mahazo valisoa, fa ny iray. izay mandika izany sy tsy manao izany dia tsy manafoana na inona na inona).
Amin'ny lafiny iray, ao amin'ny fanisana ny mitzvos izay mialoha ny lalàn'ny fibebahana, dia nanoratra toy izao i Maimonides:
Didy iray no natao, dia ny hiverenan’ny mpanota hiala amin’ny fahotany eo anatrehan’Andriamanitra ka hiaiky heloka.
Noho izany dia misy sary toa hafa mipoitra. Ny olona nanota dia asaina miverina amin’ny asa ratsiny, ary ankoatra izany dia asaina mibaboka koa izy. Eto ny valiny dia aseho ho made matzah, ary misy singa roa: ny mamaly sy mibaboka. Mifanohitra amin’izay hitantsika tao amin’ny tenin’i Maimonides b izanyNy Bokin’ny Didy. Amin'ny fanazavana ny fomba fiasan'i Maimonides, dia nisy toro-lalana samihafa nambara, ary amin'izao tranga izao dia tsy tena mamelabelatra momba izany fifanoherana izany izy ireo. Hanolotra lalana hafa isika eto, mifototra amin'ny fahatakarana ny anjara asan'ny Ny Bokin’ny Didy Ary ny fahatakarana ny momba ny valiny.
Hita avy amin’ny fandinihana ny fototeny efatra nialoha ny MaimonidesNy Bokin’ny Didy Ny azy, Maimonides dia mametraka ao amin'ny kôlejiny mitzvos izay manana didy mazava ao amin'ny Torah. Mitzvot izay ianarana avy amin’ny midrasha (jereo ao amin’ny fototeny faharoa), na avy amin’i Sabra, na avy amin’ny Knesset, dia tsy tafiditra ao amin’ny kôlejintsika. Raha izany no izy dia mety misy trosa avy amin'i Dauriyta izay tsy voalaza aoNy Bokin’ny Didy. Ny fehin-kevitra dia ny hoe tsy miseho ao ny mitzvah dia tsy voatery midika fa tsy mitzvah avy amin'ny Torah izany.
Misy didy mazava ve ao amin'ny Torah momba ny didin'ny teshuva? Hitantsika teo ambony fa teny fikasana fa tsy didy, araka ny voalazan’i Maimonides ilay andininy hoe “Ary ny Sabata ho an’i Jehovah Andriamanitrao”. Na izany aza, bTanana mahery Maimonides dia mitondra ny adidy hibebaka ho toy ny adidy tanteraka. Ny vahaolana amin'izany dia na dia misy fiampangana aza dia avy amin'ny sabra izany fa tsy baiboly ka tsy hita ao.Safamatz. Mifanohitra amin’izany kosa ny bTanana mahery Maimonides dia mitondra ny adidintsika halakhic rehetra, na avy amin'ny Torah, na avy amin'ny midrasha, na avy any Durban na fomba amam-panao, ary noho izany dia hita ao koa ny adidy hibebaka.
Hitanay fa farafaharatsiny araka ny filazan'i Maimonides dia mifototra amin'i Sabra ny adidy hanao valiny. Raha misy tokoa ny fantsona noforonin'Andriamanitra hiverenantsika sy hanonerana ny fahotantsika, dia tsy maintsy mampiasa izany fotsiny avy amin'i Sabra isika (jereo ny Midrash izay hita ao amin'ny Brish). Shaarei Teshuvah Ho an'i R.I., momba ny ambanin'ny tany izay mivoy ao amin'ny fonja, izay tokony halehan'ny voafonja tsirairay).
Izany ihany koa no mahatonga an'i Maimonides ao amin'ny Teshuvah tsy mitanisa ny lalàna fotsiny, fa koa mamaritra ny fizotran'ny Teshuvah, ary mitanisa ny hatsaran'ny Baal Teshuvah (jereo ny Ibid. F) izay fototry ny fahafahana sy ny adidy hanao valiny. . Tsy mahita an'io karazana fanoratana io izahay ao amin'ireo rakitra halachic hafa an'ny Maimonides. Hita fa natao handresy lahatra antsika ireo rehetra ireo fa tsy maintsy misy valiny, ary azo atao izany. Ny antony iezahan'i Maimonides ao amin'ny bokiny halakhic handresy lahatra antsika hanao mitzvah, dia satria tsy misy didy ao amin'ny mitzvah (= valiny). Ao Sabra no fototra iorenany, ary noho izany dia tsy maintsy mandresy lahatra antsika i Maimonides fa tsy maintsy atao izany, ary tsy iray amin'ireo didy lehibe indrindra izany (ary jereo Lacham PG HG, izay nanoratra fa izay tsy nibebaka tamin'ny asa dia hotorina amin'izany, ary ny loza dia fahotana ho azy. Mifanohitra amin'ny tenin'nytoerana Ilay etsy ambony hoe tsy mamaly dia azo antoka fa tsy fandikan-dalàna. Ary angamba misy fisarahana eo amin'ny fanaovana sy ny sisa amin'ny taona).
Ao amin'ny sisin'ny fanamarihan-tsika dia manamarika fa matetika ny tsy fahampian'ny didy momba ny adidy halakhic dia noho ny tsy maha-zava-dehibe azy ireo ka ampidirina amin'ny halakhic dauriyta. Saingy misy ny didy izay mahatonga ny tsy fisian'ny didy iray noho ny maha-zava-dehibe azy sy ny fahamatorana. Ao amin'ny mitzvos izay fototra amin'ny asan'Andriamanitra, ny Torah dia mitandrina mba tsy handidy antsika, mba hanao izany avy amin'ny iteruta deltata.
Ny raby ao amin’ny taratasiny dia manoratra fitsipika fototra mitovy amin’izany momba ny asan’ny hatsaran-toetra. Hazavainy ao fa amin’ny zavatra fototra ao amin’ny asan’Andriamanitra dia tohina ny fiheverana voalohany fa izay tsy mibaiko sy manao dia lehibe. Izany no tsy nandidian'ny Torah antsika ny amin'ireo. Ohatra voalohany amin'izany ny adidy hamaly.
Ry Rainay sy Mpanjakanay, tafaverina amin’ny fibebahana tanteraka eo anatrehanao izahay.
Maniry ny Beit Yeshiva manontolo aho, ny Rosh Yeshiva Shlita, ny mpiasa feno fanoloran-tena, ny mpianatra malala rehetra ary ny fianakaviany amin'ny ankapobeny ny Beit Yisrael manontolo, ho soratra tsara sy sonia ao amin'ny bokin'i Tzaddiks. Ho taom-pahombiazana sy fitsaharana masina anie izany. Taonan'ny fahasalamana (indrindra ho an'ilay zazalahy malala Israel Yosef ben Ruth ben Tolila sy ho antsika rehetra). Taona aliyah amin'ny Torah sy asa ary fahombiazana amin'ny asantsika rehetra.
 Ary eny izy bfiainan’olombelona, AryShaarei Teshuvah R.I.
 Na dia ny GRIP amin'ny fandikana azy hoNy Bokin’ny Didy Ny Rasg, dia manazava fa ny fomba Rasg dia manana mitzvah hihinana hena rehefa tsara ny toe-javatra misy antsika, izay ianarana avy amin'ny andininy: Fomba tokana anefa izany, ary azo antoka fa misy ihany koa ny lalàna momba ny famonoana olona amin'ny toe-javatra izay te hihinana hena fotsiny ny olona iray, na dia tsy midadasika aza ny fetrany ary tsy misy mitzvah ny fihinanana azy.
 Tsotra ny fahitany: raha fahotana tokoa ny fibebahana tsy misy fiaiken-keloka, izany hoe ny fanafoanana izany, satria ratsy noho izay nanota ka tsy nibebaka mihitsy ny toe-piainan’izay nanota sy nanao fibebahana tsy nibaboka. Mazava ho azy fa tsy azo inoana izany.
 Misy ohatra maro momba ny mitzvos izay misy antsipiriany sasany. Ohatra, ny baikon'ny karazana efatra, na ny baikon'ny tassel (manga mazava sy fotsy). Jereo ny momba izany ao amin'ny fototeny XNUMX amin'ny Maimonides.
 Ny sasany dia nanazava ny tsy fisian'ny mitzvah an'i Yishuv Ai amin'ny fanisana ny mitzvos, na dia misy porofo sasany aza fa manaiky koa i Maimonides fa mitzvah avy amin'ny Torah izany.
 Jereo koa ny lahatsoratra hoe "Fandraisana anjara sy Challah: Eo anelanelan'ny Didy sy ny Sitrapon'Andriamanitra", mitataovovonana Kaz (ary teo aho no nanavaka karazana mitzvos roa toy izany).
J On Fikambanana mpanavakavaka ve ny Lehavah? (Tsanganana 484)
Amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny sehatra ho an'ny daholobe izany fiheverana izany On Miaraka amin'ny fahafatesan'ny Prof. David Halvani Weiss (tsanganana 485)